Waa Maxay Xusuus -qorka Laga Keeno Safar? | Save A tareenka
Home > Talooyin ku Socda > Waa Maxay Xusuus -qorka Laga Keeno Safar?
Tareen safarka Shiinaha, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareen safarka Ruushka, Tareenka Safarka Switzerland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe, Talooyin ku Socda
Ma xasuusan kartaa safar kasta oo aad waligaa qaadatay, daawashada aad ka heshay, iyo cuntooyinka aad dhadhamisay? Malaha maya, taasina waa sababta hadiyadaha xusuusta ahi ay yihiin habka ugu habboon ee xusuustaas looga dhigi karo mid cimri dheer. Waa maxay hadiyadihii laga keeni lahaa safarka? Halkan waxaa ah fikradaha xusuusta ugu fiican ee dib loogu soo celin karo qayb ka mid ah jannada.
Xusuus -qorka Laga Keeno Safar: Maaddooyinka Karinta
Beeyada, suugo, dhalatada, waxay dib kuugu celin doontaa dhadhanka, carafo, iyo daqiiqado meeshaas gaarka ah. Waxaa la caddeeyay inaan inta badan ku xasuusano dareenkeena, cunnaduna waa sida ugu wanaagsan ee lagu helo meel. Waxaa intaa dheer, maaddooyinka wax lagu karsado waxay saaxiibbadaa iyo qoyskaaga dareensiin doonaan inay kula joogeen.
Dhirta Shiinaha, maraqa baastada, iyo xitaa baastadu waa xusuus xusuus cajiib ah oo laga soo celiyo safarkii Shiinaha, ama Talyaaniga, tusaale ahaan. Sidaas, xusuusnow inaad xirxirto bac dheeraad ah oo loogu talagalay kuwa cuntada cuna, maadaama ay wanaagsan tahay in si gooni ah loo xiro waxyaalahan xusuusta leh. Ma jeclaan doontid inaad furto shandadda si aad u ogaato in dharkaagu ku jiro hooska paprika cas.
Taageerida dhaqanka iyo fanaaniinta maxalliga ah waxay ku tusaysaa inaad tahay musaafir fekeraya oo caqli badan. Suxuunta suugada gacanta lagu rinjiyeeyay, dharka miiska ee tolmoon, ama shaadhadhka sharooto ee la xardhay waa hadiyado fantastik ah oo saaxiibbadaadu qaddarin doonaan, isticmaalka, iyo hab aad u wanaagsan oo aad ugu muujin karto mahadnaqaaga bulshada ku soo dhaweysay.
Farshaxanka maxalliga ah waa xusuus xusuus leh oo laga soo celiyo safar kasta oo Yurub iyo Shiinaha ah. Shiinaha, waxaad heli kartaa laambado gaduudan nasiib wacan, ka yimid Ruushka a gacanta Domovichok kaas oo ka ilaalin doona gurigaaga ama galaas biir qabow Prague oo loogu talagalay adeerkii ama walaalkii beer-jecel. Waa maxay goobaabin weyn bey'ada saaxiibtinimo safarka, helaya, iyo faafinta dhaqanka cajiibka ah ee adduunka oo dhan.
Ka dhig safarkaaga qayb ka mid ah gurigaaga, oo leh ubax qurux badan oo Delft ah ama tulip alwaax ka yimid Netherlands. Xusuus -qorka qurxinta guriga wuxuu noqon karaa mid gacanta lagu sameeyo, waxayna inta badan ka sheekeeyaan dhaqanka iyo taariikhda ay ka soo jeedaan.
Saxan dhoobada ah oo gidaarka ku yaal, crystal bohemian ka Czech Republic, ama saacadaha cuckoo ka Black Forest waa hadiyado waaweyn oo aad gurigaaga ka soo kaxayso safarkaaga Yurub.
Rimini ilaa Florence Tareen
Rome ilaa Florence Tareen
Pisa ilaa Florence Tareen
Xusuus -qorka Ka Keen Safar: Khamriga Deegaanka
Wadaagista sheekooyinka safarka ka badan hal galaas oo khamri ah ayaa kaa caawineysa in lagu xasuusto dhammaan faahfaahinta casiirka leh, iyo daqiiqado xiiso leh. Keenista khamriga maxalliga ah waa xusuus caan ah oo laga keeno Yurub, gaar ahaan haddii ay tahay cabbitaanka aalkolada leh dhammaantood waa inay isku dayaan adduunka oo dhan.
Sidaas, Limoncello oo ka yimid Talyaaniga, ama khamriga Riesling ee dooxada Rhein ee Jarmalka, labada jid, dadka qaata ayaa aad ugu farxi doona inay helaan hadiyaddan oo kale. Haddii aadan hubin waa maxay cabitaanka maxalliga ah, fiiro u yeelo muraayadaha ku yaal miiska dadka deegaanka inta casho lagu jiro ama weydii baarka xaafadda.
Dahabka ayaa ah hab la yaab leh oo lagu qaado safarkaaga qalbiga. Silsilad silloon, hilqado amber ah oo ka yimid Poland, ama jijimooyin soo jiidasho leh oo lacag ah, waa gogo 'aan marna ka bixin qaabka, weliba weliba, waxay yihiin kuwo aan waqti lahayn.
Sidaas, haddii aad xiisaynayso inaad keento hadiyado aan caadi ahayn, markaa dahabka waa kaamil. Ku darida jijimooyin jijimooyinkaaga waddan kasta waa booqashadu waa yaab. Si kastaba ha ahaatee, marka aad ka iibsaneyso dahabka dal shisheeye, ka taxaddar sida loo maareeyo lacag caddaan ah oo ha ku dhicin mid ka mid ah khiyaanooyinka safarka ee caanka ah adduunka oo dhan.
Dijon in Provence tareen
Shey Ay Ururiyaan
Ha illoobin furayaasha iyo kaadhadhka boostada, haddii saaxiibbadaadu yihiin ururiyaha, ma jirto wax I I Care ka badan gabal u gaar ah oo ay ku dari karaan ururintooda. Qof walba wax buu ururiyaa: koob biir ah oo la qurxiyey oo ka yimid Prague, Farshaxanka muraayadda Murano, Ruushka Babushka oo ku sawiran caruusadaha, kuwaasina waa tusaalooyin kooban.
Intaas waxaa sii dheer, muraayadaha rasaasta, koofiyadaha, iyo musmaarradu waa xusuus kale oo la soo ururiyo oo laga soo kaxeeyo safarkii Yurub. Giddi darbiga, loo isticmaalo xafladaha, ama ku kaydsan album, saaxiibbadaadu waxay qiimeyn doonaan waqtiga aad ku qaadatay raadinta hal gabal oo gaar ah iyo sheekada ka dambaysa.
Daawooyinka macaan oo xiisaha leh ayaa dhoola cadayn doona oo soo jiidan doona dareenka dhegeystaha. Cuntadu waa habka ugu fiican ee lagu helo meel, dhammaan dhadhannada uu qofku u safro dhaqanka iyo sheekooyinka. Tusaale ahaan, Reer Paris Macarons ma aha oo kaliya xusuusta macaan. Waxay sidoo kale wali qabtaan nuxurka iyo ruuxa Renaissance -ka Faransiiska ee kaamilnimadooda, qaab dhalaalaya oo heer sare ah.
Sidaas, halka dhawr qaniinyo ka dhigaan xusuustaas la waayo, dhadhanka iyo dareenka yaabka leh ayaa nala jooga weligiis. Dareenkayagu wuxuu had iyo jeer xusuusnaan doonaa markii ugu horreysay ee aan isku dayno shukulaatada Swiss, iyo kuwa qaata xusuustaada macaan ayaa iyagana xusuusan doona. Isku soo wada duuboo, hadiyadihii macaanaa waa xusuus xusuus leh oo laga soo celiyo safarkii Yurub.
Xusuus -qorka Laga Keeno Safar: dharka
Dukaameysiga waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee dibadda lagu sameeyo. Waad beddeli kartaa qaabkaaga, ku dar shey khaas ah dharkaaga sida marada dhaqanka ee midabka leh ee ka timid Ruushka, jaakad maqaar ah oo ka timid Talyaaniga, iyo in ka badan. Haddii aad qorsheyneyso inaad saaxiibbadaa u keento gabal dhar ah, markaa waa inaad ogaataa qaabkooda iyo cabbirkooda dabcan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hadiyado badan oo dhar ah oo laga dooran karo Yurub, oo aan ku lug lahayn xulashada cabbirka. Berlin waxay ku habboon tahay dukaameysiga guridda, Funaanado laga soo qaaday suuqyada waddooyinka London, xarig qabow oo ka socda Paris ama Talyaaniga, waa uun dhowr fikradood oo xusuusta dharka ah oo laga keeno adduunka oo dhan.
Xusuus -qorka Cliche ee laga keeno Safar Yurub
Marna kuma khaldami kartid hadiyadaha caadiga ah. Tusaale ahaan, saaxiibbada hadiyadda iyo qoyska furaha furaha ee Eiffel Tower, Alwaax Ruush Matryoshka, ama alwaax alwaax ah oo ka yimid Amsterdam, kuwani waxay ahaan doonaan xusuus xusuus leh oo feker leh. Waxaa intaa dheer, waxaad gegida diyaaradaha ka iibsan kartaa waxyaabahan xusuusta Yurub ee caadiga ah, ama tareenka, daqiiqadii ugu dambaysay. Si kastaba ha ahaatee, tixgeli xusuus -qorkaas’ Qiimuhu aad buu uga badan doonaa dukaanka saldhigga tareenka, ka badan magaalada.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino qorsheynta safar aan la ilaawi karin Yurub. Waxaad si sahlan ugu safri kartaa tareenka meel kasta oo Yurub ah, dukaan oo ku raaxayso safar sahlan ayaa shandado ka buuxsami doona hanti iyo xusuus.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga baloogga “Maxay Xusuus -qorka Ka Keenayaan Safar?”Bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fsouvenirs-bring-trip%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)